Ny bus EGO dia hanome serivisy maimaim-poana ho an'ny olompirenena izay mody amin'ny fandraràna | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ireo bus bus EGO dia hanome serivisy maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena tsy voarara
22 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
Ny bus ego dia hanome serivisy maimaimpoana ho an'ny olom-pirenena tsy voarara
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia nahavita ny fiomanana amin'ny Eid al-Fitr. Ho an-dalambe sy fehezin'ny Başkent, ny asa fanadiovana no tanterahina any amin'ny fasana, raha toa kosa ny ekipan'ny Departemantan'ny Polisy dia nanamafy ny fizotran-tsakafo azy indrindra ho an'ireo orinasa mamokatra zava-mamy. Biraon'ny krizy, Başkent 153, ASKİ, Brigade Afovoany Ankara ary ekipan'ny Polisy monisipaly dia hiasa amin'ny 7/24 mandritra ny lanonana, ao anatin'izany ny andro Arife. Ny fivarotana antsinjaram-bokatra Halk Ekmek sy ny tsiranoka Halk Ekmek dia hisokatra afa-tsy eo anelanelan'ny 23-3 amin'ny 26 Mey, Sabotsy sy 10.00 Mey. Ny ekipa siantifika sy ASKİ dia hanohy ny fotodrafitrasa sy ny sangan'asa. Ny fiara fitateram-bahoaka EGO, izay mitondra maimaimpoana maimaimpoana mandritra ny fetim-pirenena sy ara-pinoana, dia hiasa amin'ny olom-pirenena tsy afa-mandeha amin'ny làlana fivoahana.
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia nahavita ny fiomanana rehetra manerana ny tanàna alohan'ny Fetin'ny Ramadany, izay handalo eo ambanin'ny aloky ny curfew noho ny valanaretina coronavirus amin'ity taona ity.
Baskent 153, Biraon'ny Krisis, EGO ary Tale jeneralin'ny ASKI, Polisy Ankara ary Departemantan'ny afo Metropolitan dia hiasa 7/24 hamahana ny filàna sy ny fangatahan'ny mponina ao Ankara mandritra ny fialantsasatra.
EGO NEFA MOA MISY HAMPITENY DIDIKA MAIKA
Ny Tale jeneralin'ny EGO, izay hanome fitateram-bahoaka mandritra ny ora sasany amin'ny andron'ny 23 Mey, dia hanome serivisy fiaramanidina maimaim-poana eo anelanelan'ny 24 sy 26 May, afa-tsy amin'ny rafi-pitaterana, mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny Birao Foibe Miadidy ny Governemanta any amin'ny faritany Ankara:
- 23 Mey 2020: 07.00-20.00
- 24-26 Mey 2020: 07.00-09.00 ary 16.30-20.00
Mandritra ny Fetin'ny Ramadany, izay ny fanapahan-kevitry ny fivondronan'ny Kaominin'i Metropolitan hanome serivisy fitaterana maimaim-poana amin'ny fety ara-pivavahana sy nasionaly, ireo mponina ao Ankara izay voaroaka amin'ny làlana fandroana dia hahazo tombony amin'ny bus EGO maimaim-poana amin'ny ora voatondro.
TAM-BOKIN'NY MPISORO FAMPIHORANA MOMBA NY FIFIDIANANA VOLA
Manampy trotraka ny fitsirihana ara-tsakafo tsy tapaka ataon'ireo olom-pirenena mba hahazoana sakafo ara-pahasalamana alohan'ny fialantsasatra, Polisy Ankara; Manohy ny fanamarinana ataon'ireo orinasa mamokatra sy mivarotra vokatra bakery sy vokatra mamy izany.
Ny hetsika ara-dalàna dia raisina ho an'ny tsy fahampian'ny fitandremana ao amin'ny kaonty izay manamarina raha voamarina ny fanarahana ny fahasalamana, ny fahadiovana, ny takelaka hetra ary ny valan'aretina coronavirus, ny fanarahana ny fampiasana saron-tava, fonon-tanana, taolan-tànana, taolana ary tazomoka, elanelana ara-tsosialy, tondroina ny mpiasa sy ny mpanjifa.
Ny filazalazana fa ny Sampan-draharahan'ny Polisy ao Ankara dia hijery ihany koa raha mihidy ny orin'asa sy ny orin'asa amin'ny andro kodiarana, ny talen'ny Polisy ao amin'ny Distrika Metropolitan Mustafa Koç no nanome izao fanazavana manaraka izao:
"Mandritra ireo andro ireo, rehefa miomana hihaona amin'ny Eid al-Fitr voatahy miaraka amin'ireo teratany Ankara isika amin'ny fepetra hamelezana ny areti-mifindra, dia manohy ny fifehezana manerana ny tanàna ny ekipanay, izay mifamezivezy mandritra ny famantaranandro. Ao afovoany, manana ekipa izay mamaly avy hatrany izahay amin'ny fitarainana izay tonga amin'ny tsipika Başkent 153. ”
CEMETERY MAVAVANA MITADIAVAINY
Nanomana ny fanadiovana ny fasana mialoha ny fialan-tsasatry ny Ramadany ny departemantan'ny Cemeteries ary nanomana azy ireo mandritra ny fitsidihana.
Ankoatra ny distrika rehetra eto an-drenivohitra KarşıyakaRaha nanatanteraka asa fanadiovana an-tsokosoko tao Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum ary Sincan Cimşit Cemeteries, dia noraisina ny fikarakarana mba hahazoana antoka fa ny fisehoana ankapobeny amin'ny fasana izay dibo-drano be dia be alohan'ny fety noho ny curfew.
Tao anatin'ny sakelin'ny asa izay nohajain'ny hazo tao am-pasana, nokapohina ny hazo maina, ary koa ny ahi-dratsy. Nisy ny fanadiovana tamim-pitandremana izay natao tany am-pasana tao am-pasana izay navela hitsidika ny havany tamin'ny andro voalohany tamin'ny andro firavoravoana.
Ny filazan'izy ireo fa nanomboka ny fanomanana ny fankalazana ny 1 volana lasa izay tany amin'ny fasana rehetra, hoy ny lehiben'ny sampam-pasan'ny Cemeteries Köksal Bozan:
"Mifanaraka amin'ny torolàlana nataon'ny Ben'ny tanànanay Mansur Yavas, tsy ny fasana afovoany ihany fa ny fasana rehetra ihany koa no nodiovina. Ny asa fanadiovana sy fikojakojana dia vita amin'ny fasanay 6 eto afovoany. Nanomboka nanao fandrefesana afo izahay teo am-bavahadin'ny vavahadin'ny firenentsika izay tonga nitsidika, dia manome saron-tava ho an'ireo tsy misy saron-tava koa izahay. Ny havan'ny maritiora dia ho afaka hanao fitsidihana maritiora amin'ny andro voalohany amin'ny fialan-tsasatra mifanaraka amin'ny boriborin'ny minisiteran'ny atitany. Hisokatra ny toeram-pandevenana antsika amin'ny fitsidihan'ny olom-pirenentsika tsy manam-patoana mandritra ny làlana mandeha. ”
TAMIN’NY ANKARA AN’AIMPOO miaraka amin’ny KAPETALANA 153 ARY TOROHEVITRA KRISISO ATAO FIVAVAHANA 7/24 INDRINDRA
Mihetsika ho tetezan'ny fifandraisana eo anelanelan'ny tanàna renivohitra sy ny kaominina Metropolitan, i Başkent dia hiasa amin'ny 153/7 hamahana ny fangatahan'ny olom-pirenena haingana araka izay azo atao amin'ny fialantsasatra 24.
Ny tsipika Crisis desk sy ny fanohanana ara-tsaina natsangana nandritra ny fizotry ny valanaretina coronavirus dia hitohy hatrany amin'ny fitakian'ny olom-pirenena mandritra ny fialan-tsasatra. Afaka mandefa ny fangatahany sy ny fitarainan'izy ireo any amin'ny Kaominin'i Metropolitan amin'ny alàlan'ny laharan-telefaona “0312 666 60 00” ny mponina ao Ankara na amin'ny alàlan'ny renivohitra 153.
Ny sampana mpamono afo ao Ankara koa dia hiasa 46/7 amin'ny toeram-piangonana 24 miaraka amin'ireo distrika. Ireo mponina ao Başkent dia afaka hanao tatitra momba ny afo mety hitranga amin'ny alàlan'ny Ivotoerana Call Call Emergency darurat.
NY HANGERANA SY MPANJAKA miasa amin'ny DOTY
Ny talen'ny jeneralin'ny ASKI dia hanohy ny serivisy amin'ny Capitals, 7/24, mandritra ny fialantsasatra.
Raha sendra mila maika, dia afaka mankany ASKİ ny olom-pirenena amin'ny alàlan'ny foibe antso vonjy maika hoe "0312 616 10 00" na amin'ny renivohitra 153. Ireo ekipa ASKİ, izay hanohy ny serivisy finday mandritra ny 24 ora amin'ny serivisy fidirana amin'ny fanamafisana sy fanamboarana ny Card Counter; Hiatrika ny adiresin'izy ireo ny mpivarotra karatra, olom-pirenena marefo, fiarovana, indrindra ny olom-pirenena miisa 65 mahery.
Ny fananganana serivisy foibe ASKI ankapobeny dia hisokatra eo anelanelan'ny 4-08.00 mandritra ny 17.00 andro ho an'ny serivisy fanoloana, fanavaozana ary fampidinana ireo karatra magnetic counter. Hanohy ny fahatapahan-dry zareo, ny fikojakojana ary ny fotodrafitrasa ihany ireo ekipa tsy misy fahatapahana.
Ho tafiditra amin'ny tolona miady amin'ny coronavirus, ny departemanta misahana ny siansa, izay nampitombo ny fiovan'ny asfalt ao amin'ny curfew ampiharina amin'ny faran'ny herinandro, dia hitohy amin'ny fialantsasatra. Ny ekipan'ny departemantan'ny siansa momba ny siansa, izay hanao asa fametrahana sy fikojakojana asfaltista afovoany sy ny distrika rehetra dia samy hanome endrika maoderina sy fiarovana fiara eny an-dàlana an-drenivohitra.
ANDRO FANDAMINANA ARY ANY ANY MODALANA
Ny ekipan'ny Departemantan'ny Aesthetika City dia nanafaingana ny asa fanadiovana teto an-tanàna talohan'ny Fetin'ny Ramadany.
Ho an-dalambe sy fehezin'ny Ankara, ireo ekipa manao hetsika fanasana eo amin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, ny dabilio, ny sisin-dalana, ny kianja ary ny sakana amin'ny teboka afovoany toa an'i Ulus sy Kızılay dia nanomana ny tanàna ho amin'ny fankalazana. Ny fiara mandroaka sy ny ekipa finday dia hanohy hiasa amin'ny 7/24 mandritra ny fankalazana izay fangatahana fantsom-pifamoivoizana hiasa amin'ny faran'ny Ankara.
SOROKA FOTOTRA NY FIVORIANA ARAKA NY FIVORIANA ARY ARY HOLIDAY
Ny orinasa Metropolitan Munisipaly Bread Factory, izay lasa marika eto an-drenivohitra, no namaritra ny fandaharam-potoana ho an'ny Fetin'ny Ramadany.
Halk Ekmek, izay mikarakara ny andro sy ora fiasana mba hamenoana ny filan'ny olom-pirenena ary mitondra ny vokatra avy amin'ny mpamokatra eo an-toerana ho any amin'ny taliny, dia nanolotra ny karazana baklava sy ny tsindrin-tsakafo izay nomanina manokana hanomanana ny fankalazana ny tsiron'ny kapitalista.
Ny fivarotana Halk Ekmek sy ny famonosana Halk Ekmek dia hisokatra afa-tsy eo anelanelan'ny 23-3 amin'ny asabotsy 26 mey, talata ary 10.00 may, andro fahatelo amin'ny fialantsasatra.
Taorian'ny fanombohan'ny fandalovan'ny fifankahalana taorian'ny nahazoan'ny olom-pirenena hiverina an-trano ny olom-pirenena 65 taona no ho miverina, ny fepetra rehetra ilaina dia raisina amin'ny AŞTİ. Raha ny olompirenena manana fahazoan-dàlana dia tsy alaina amin'ny AŞTİ raha tsy saron-tava, dia raisina ho avo kokoa ihany koa ny fepetra fiarovana.
15 any Batman Ny bus rehetra dia hanompo maimaim-poana amin'ny Jolay
3. Ny seranam-piaramanidina dia milaza fa tsy misy fepetra avy amin'ny tatitra avy amin'ny EIA
Tsy azo aloa ny EIA ny Fitsarana
Hanafoana ny fanadinana mahay ve ireo mpanatontosa?
Ny lalamby dia tsy hivoaka amin'ny Lalàna momba ny Fitrandrahana ho an'ny vahoaka hatramin'ny 2023!
Ny tetezana fahatelo dia tsy manan-kery amin'ny VAT.
Ny mpiasa amin'ny sehatry ny fambolena, biby fiompy sy sakafo dia ho famafazana amin'ny curfew
Hikatona amin'ny lamasinina EGO, Metro ary ANKARAY ny rafitra fitsinjarana ny rivotra
Fandefasana malalaka ho an'ny olom-by Electric Buses any Eskisehir
EGO fitateram-bahoaka any amin'ny serivisy feno Capacity Ankara